» वीर्य स्खलनपछि यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ ?
वीर्य स्खलनपछि यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ ?
१४ आश्विन २०७८, बिहीबार १५:१२
कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमै गर्भ रहन्छ, तर सधैं त्यस्तो हुँदैन । गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । पहिलो कुरा त शुक्रकीट र डिम्बको मिलन हुनुपर्छ ।
शुक्रकीटसँग मिलन हुन डिम्ब निस्किएको समय हुनु जरुरी छ । महिलामा डिम्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ । डिम्ब निष्कासन हुने समय नजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ । डिम्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ ।
यस्तै २८ दिनको महिनावारी भएका महिलाको १४ औं दिनतिर डिम्ब निस्कने भएकाले उक्त समयमा यौनसम्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना एकदमै बढी हुन्छ । डिम्ब निस्किएको यस्तै २४ देखि ४८ घण्टासम्म बाँच्छ भने शुक्रकीट महिलाको प्रजनन अङ्गभित्र ७२ घण्टा वा त्योभन्दा बढी बाँच्न सक्छ ।
त्यसैले डिम्ब निस्कने केही अघिको र केही दिनपछिको समयलाई गर्भधारण हुन सक्ने समय मानिन्छ, तर महिनावारी ठिक २८ दिनमा नभै ढिलो–चाँडो हुन्छ भने केही फरक पर्न सक्छ ।तपार्इंलाई थाहै होला कन्डम एउटा प्रभावकारी गर्भनिरोधको साधन हो, तर यसको प्रयोग सही तथा नियमित तरिकाले गर्नुपर्छ ।
सामान्य रूपमा कन्डम प्रयोग गर्दा यसको प्रभावकारिता यस्तै ८२ प्रतिशत हुन्छ, अर्थात् १ सय जना महिलाले यसलाई प्रयोग गर्दा एक वर्षमा सालाखाला यस्तै १८ जना महिला गर्भवती हुन सक्छन् । यसको अर्थ के पनि हो भने कन्डम नै प्रयोग गर्दा पनि एक हदसम्म गर्भ रहन सक्छ ।
लिङ्गबाट निस्कने सेतो पदार्थ नै वीर्य हो, त्यसैले यसलाई वीर्य स्खलन भनिन्छ । यही वीर्यमै शुक्रकीट हुन्छन् ।
वीर्य स्खलन भैसकेपछि कन्डम फुकाल्नासाथ यौनसम्पर्क गरेको हो कि ? त्यसपछि लिङ्गलाई पानीले पखालियो कि पखालिएन वा त्यसपछिको यौनसम्पर्क तुरुन्तै भएको हो कि केही घण्टापछि भएको हो रु वीर्य स्खलनपछि फेरि यौनसम्पर्क गर्नुअघि पिसाब फेरियो कि फेरिएन रु जस्ता कतिपय कुराका आधारमा गर्भ रहनेरनरहने सम्भावना बढी वा कम हुन सक्छ ।
वीर्य स्खलनपछि पिसाब फेर्दा भने मूत्रनलीमा भएका शुक्रकीट पखालिने भएकाले गर्भको सम्भावना कम हुन्छ । कुरा जे भए पनि वीर्य स्खलन भैसकेपछि मूत्रनलीमा केही शुक्रकीट हुन सक्छन् र त्यसले गर्भ बसाउन सक्छ ।
तपाईंहरूले यौनसम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुको अर्थ तपाईंको केटासाथीमा यौन उत्तेजना कायमै थियो भन्ने बुझिन्छ । यस्तो स्थितिमा वीर्य स्खलनअघि आउने रसमा पनि शुक्रकीट हुन सक्छन् भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन । यदि उक्त घटना डिम्ब निष्कासन हुने बेलातिर भएको भए गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ भने महिनावारी हुने वा भएको बेलातिर भए न्यून ।